मधेसी मोर्चा र बैद्यलाई समेत समेटने : प्रधानमन्त्री | सप्तरी जागरण
मधेसी मोर्चा र बैद्यलाई समेत समेटने : प्रधानमन्त्री
Posted by वैद्यनाथ यादव on July 30, 2015 in राष्ट्रिय समाचार
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभा भित्र रहेका असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र बाहिरको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको मागलाई समेत सकेसम्म समेटेर सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न आफू लागेको बताएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले नयाँ बन्ने संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुनु पर्ने मागसहितको अध्यक्ष ऋषि धमला नेतृत्वको टोलीले शनिवार निवासमै बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने–सीमांकन पनि अहिलेनै होस भन्ने पक्षमा हामी प्रयत्नशिल छौ । हिजो चार दलको बैठकमा पनि छलफल भएको छ ।
मोहन बैद्यजी र मधेसी मोर्चाका साथीहरुसँग पनि कुरा भईरहेको छ । उहाँहरुको मागलाई कति समेट्न सक्छौ त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौ । हामीले राणा शासन विरुद्ध, पञ्चायत शासनको विरुद्ध लड्यौ र राजसंस्थालाई हटाएर लोकतन्त्र ल्याईसकेका छौ ।
माओवादीलाई पनि हामीले लोकतन्त्रको मेन स्ट्रिममा ल्याएका छौ । लडेको मात्रै १ सय वर्ष भईसक्यो अब पनि लडेर बसिरहने हो ? मुस्लिम, दलित, महिला, आदीबासी जनजाती, पीछडिएको वर्ग, मधेसीको अधिकार समेटिदैन भनेर बाहिर हल्ला फैलाईएको छ । यो गलत हो । सबैको माग समेटीन्छ । बाहिर फैलाईएको हल्ला वाईयात हो । त्यसको पछाडि तपाईहरु नलाग्नुस । सीमांकन सहितको संविधान जारी भए अझै उत्तम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएको राय सुझावलाई समेट्ने विषयमा सबै दल सकारात्मक भएको जानकारी दिदै हिजो चार दलको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने–जनताले छोटो समयमा प्रभावकारी सुझाव दिएर राम्रो काम गरेका छन । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, धार्मिक स्वतन्त्रता, प्रेसको स्वतन्त्रता, बाक तथा अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता, हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रता सबैले स्विकारेको विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा राय सुझावमा ब्यापक सुझाव आएकोले त्यसमा छिट्टै निर्णय लिईने स्पष्ट पारे ।
उनले संविधासभाबाट संविधान ल्याउने आफूहरुको पहिलो अभ्यास भएकोले कतिपय कुराहरुमा कमिकमजोरी होला त्यसलाई पनि सुधारेर हामी जनताको चाहना अनुसारको लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै अब संविधान जारी गर्न कसैले पनि रोक्न नसक्ने ठोकुवा गरे । प्रधानमन्त्रीले भने–सकेसम्म यही महिनाको अन्तिम सम्म संविधान ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।
दुई चार दिन ढिला होला तर अब संविधान कुनै शक्तिले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । तपाईहरु ढुक्क भएर जानुस रिपोर्टर्स क्लबले गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको माग पनि संविधानमा समेटिन्छ । प्रजातन्त्रको विश्वमा विभिन्न किसिमको ब्याख्या भए जस्तै बहुलबादको पनि विभिन्न ढंगले ब्याख्या हुने गरेको उल्लेख गर्दे उनले उनले लोकतन्त्र भनेकै बहुलवाद भएकोले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र नै बहुलबादको रुपमा रहेको ब्याख्या गरे ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता आफै पूर्ण स्वतन्त्रता हुने भन्दै प्रेसको अधिकार कुण्ठित भए पत्रकारहरुसँगै नेपाली काग्रेस पनि आन्दोलनमा उत्रने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले भने–प्रेस स्वतन्त्रता मिन्स पूर्ण स्वतन्त्रता हो । पूर्ण प्रजातन्त्र पनि हुन्छ र प्रजातन्त्र भनेको फुलफ्लेज हो । पूर्ण भन्यो भने त अपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रेसलाई कुनै पनि अवस्थामा कुण्ठित नपारिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै प्रेस राज्यको चौथो नभई पहिलो अंग भएकोले प्रेसले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
राप्रपा नेपालको आन्दोलन प्रति रुष्ठता प्रकट गर्दै उनले भने–राप्रपा नेपालले ढुंगा मुडा किन गर्ने ? सुझाव दिएको भए हुन्थ्यो, सुझाव दिएको भए त्यो लिपिबद्ध हुन्थ्यो । उसको ब्यवहारले जनता चिढिए । मकवानपुर र अन्य देशभरी जे घटना भयो राम्रो भएन ।
मञ्चबाट आफ्नो एजेण्डा भनेको भए हुन्थ्यो । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले जस्तो सुझाव लिएर आएको भए भई हाल्थ्यो नि किन ढुंगा मुडा गर्नु पथ्र्यो । अब यस्ता साना तिना कुराले संविधान कसैले रोकेर रोकिदैन ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लबका अध्यक्ष धमलाले सक्रमणकालमा प्रेसलाई बन्देज लगाउने ब्यवस्था राख्दा त्यसले अर्को तानाशाह जन्मने खतरा हुने दावी गर्दै त्यस्ता प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने ब्यवस्थाहरु हटाएर जुन सुकै अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्र रहने ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अन्यथा कालान्तरमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण हुन सक्ने उनको आशंका थियो ।